अबको राजनीति विकास र समृद्धिका लागि हुनुपर्छ | अन्तरवार्ता | साझामन्च
राजेन्द्र गौतम, प्रकाशित मिति : २०७४ ,आश्विन , ९ 07:43:33
एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सचिव राजेन्द्र गौतम संखुवासभाबाट संघीय संसद सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्ने चर्चामा हुनुहुन्छ । जननेता मदन भण्डारीको सामिप्यमा रहेर राजनीति सुरुवात गर्नु भएका गौतमले एमाले केन्द्रीय सदस्य, कोसी अञ्चल सचिव, केन्द्रीय प्रचार विभागको सचिव लगायतका जिम्मेवारी पूरा गरिसक्नु भएको छ । पञ्चायतकालमा १६ पटक राजनीतिक कारणले गिरफतारी र जेल भोग्नु भएका गौतमले त्रिविबाट एमबीए उत्तिर्ण गर्नुभएको छ । स्थानीय तहको सम्पन्न निर्वाचन र अव आउने संघीय संसदको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर गौतमसँग गरिएको कुराकानीः
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, यसको परिणाम र सन्देशका बारेमा तपाईको विश्लेषण के छ ?
स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम नेकपा (एमाले)का लागि अपेक्षित परिणाम होइन । किन होइन भने राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेले अगाडि सारेका एजेण्डाको प्रभावकारिताको हिसावले एमाले अत्यधिक बहुमत सहित ठूलो दल हुनु पथ्र्याे र त्यसका लागि प्रशस्त आधार थिए, छन् । यद्यपि एमाले विरुद्ध भएका सरकारी षडयन्त्र र भ्रम चिर्दै एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको छ । अझै पनि एमालेका एजेण्डा सही छन् भन्ने तथ्य जनतामा स्थापित गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
कस्ता एजेण्डा स्थापित गर्नु पर्ने भन्न खोज्नुभएको ?
स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग र विशेष गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुका वीच आपसी हित र पारस्पारिक लाभका आधारमा सम्बन्ध विकसित गर्ने एमालेको नीति हो । त्यसैले व्यापार र पारवाहनमा रहेको एक देशीय निर्भरतालाई अन्त्य गर्दै हामीले मित्रराष्ट्र चीनसँग यातायात–पारवहन सम्झौता गर्यौं । तीब्र आर्थिक विकास र नेपालको आत्मनिर्भतामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने काम हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गर्यो । उहाँकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्यो भने भारतसँग बिशाखापटनम बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता गर्यो । चीन र भारत दुवैसँग अप्टिकल फाइबर, क्रसबोर्डर ट्रान्समिशन लाईन निर्माण गरेर विद्युत व्यापार गर्ने तथा दुवै देशका रेल्वे यातायातसँग नेपाललाई आवद्ध गर्ने नीति अगााडि सारेर विकास र सम्मृद्धिको ढोका खोलेको छ । एमालेका यिनै नीतिका आधारमा चुनावी परिणाम आउनु पर्दथ्यो त्यो आएन । त्यसकारण परिणाम अपेक्षित भएन भन्ने हाम्रो ठहर छ । तथापि नेकपा (एमाले) पहिलो पार्टी भएको छ । यसमा तमाम मतदाता धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
एमालेले प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचन तयारी कसरी गरिरहेको छ ?
मंसिर १० र २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वचन गर्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । यसको अर्थ हो, अब निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको छ । यसैको आधारमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको तयारी थालेका छन् । यही असोज २९ गते समानुपातिक सूची निर्वाचन अयोगलाई बुझाउनु पर्नेछ । कार्यतालिका अनुसार कार्तिक ५ र १६ गते नोमिनेशन हुँदैछ । त्यसका लागि नयाँ निर्वाचन क्षेत्र अनुरुपका पार्टी संरचनाहरु निमार्ण गर्ने र जनतामा स्थापित भएका र जनमत बलियो भएका नेता तथा कार्यकर्तहरुको नाम सिफारिस मागेर उम्मेदवारको छनोट गर्ने काममा पार्टी लागेको छ । निर्वाचन क्षेत्रानुसारको घोषणा पत्र तयारी गरिनेछ र पार्टीले केन्द्रीय स्तरको घोषणा पत्र तयार गरी त्यसैको आधारमा चुनावी अभियानमा लाग्नेछ । त्यसैको प्रारम्भिक गृहकार्य गर्न र थप रणनीति तय गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको हो ।
आउने निर्वाचनमा कुनै दलसँग तालमेलको सम्भावना छ ?
एमाले र कांग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वी पार्टीहरु हुन् । आउने निर्वाचनमा यी दलका बीचमा सहकार्य वा कार्यगत एकता सम्बभ छैन । नेकपा (एमाले) संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण , तीब्र आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोबाट अगाडि बढ्न चाहन्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न एमाले चाहन्छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अन्य वाह्य पक्षसँग लगातार सम्पर्क र षडयन्त्रको तानाबुना बुनिरहेको छ । त्यसकारण एमाले विरोधी यो महागठबन्धन कसरी अगाडि बढ्दैछ । त्यो हेर्दै जानुपर्छ तर हाम्रा बीच तत्काल चुनावी तालमेलको सम्भावना कम छ । बामपन्थी कित्तामा रहेका नेमकिपा, नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चासँग भने हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध छ ।
तपाईं पनि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ ?
ठिकै भन्नु भो । म पनि संघीय संसद अन्र्तगत प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि संखुवासभा जिल्लाबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छु । तर हाम्रोमा पार्टीको निर्णय सर्वोपरी हुन्छ । पार्टीले अनुमति दिएमा म अगाडि बढ्छु ।
उम्मेदवार भएको अवस्थामा तपाईंका चुनावी ऐजेण्डा के–के हुन् ? के भनेर भोट माग्नुहुन्छ ?
हाम्रो जिल्ला संखुवासभा विकासको मूल राष्ट्रिय प्रवाहभन्दा बाहिर छ । तर यो जिल्ला वृहत्तर संभावाना भएको ठाउँ हो । त्यसका लागि भौतिक विकासको पूर्वाधारका रुपमा रहेको सडक हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । जलविद्युत, पर्यटन शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई र खानेपानी हाम्रा मूख्य एजेण्डा छन् । त्यसमा पनि किमाथाङ्का– विराटनगर सडक, लेगुवा–तुम्लिङटार सडक र वसन्तपुर– ठुटेदेउराली–गुफापोखरी–ताप्लेजुङ सडक मुख्य रहेका छन् । अरुण र यसका सहायक नदीबाट उत्पादन हुनसक्ने १२ हजार मेगावट जलविद्युत क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
त्यसैगरी पर्यटन विकासको लागि विश्वकै सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण ( ४५७ मि), पाँचौं अग्लो मकालु हिमाल (८,४६३ मि.) र जिल्ला कै होचो भूभाग अरुण–पिलुवा दोभान (३०० मि.)लाई पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र बनाउनु पर्नेछ । मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र, तीनजुरे–मिल्के–जलजले लालीगुराँस संरक्षण क्षेत्र, माउण्टेन फ्लाइट–र्याफ्टिङ तथा कायाकिङ सांस्कृतिक पर्यटन, बृहत हिमाली पदयात्रा मार्ग, अरुण नदी जलमार्ग लगायतका क्षेत्र पर्यटन विकासका आधारहरु हुन् । हामी पर्यटनको विकास मार्फत संखुवासभामा समृद्धिको कार्यक्रम दिनेछौं ।
यसका साथै मुढे–शनिश्चरे बजारमा नेपालमै नमुना सांस्कृतिक पार्क निर्माण गर्नु पर्नेछ । चैनपुरमा ‘आशाखत्री राष्ट्रिय बानेश्वर पार्क’, खाँदबारीको ढोलबाजे सामुदयिक बन र पिप्ले सिरान सामुदायिक बनमा अरुण उपत्यका राष्ट्रिय पार्क, छ्याकुटी–लहरी पार्क र किमाथांकामा भृकुटी–स्रोङचङ गम्पो मैत्री पार्क निर्माण गरी पर्यटन विकासको आधारशीला तयार गर्ने योजना छ ।
तुम्लिङटार एयरपोर्टलाई क्षेत्रीय एयरपोर्टका रुपमा विकास गरी संखुवासभा तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ र भोजपुर जिल्लालाई समेट्नेगरी अगाडि बढाउने योजना रहेको छ । यसका अतिरिक्त शिक्षा, स्वस्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, कृषिको व्यवसायीकरण गरी नगदे वालीमा जोड दिने, रुद्राक्ष, अलैँची, चिराइतोको उत्पादन प्रशोधनमा जोड दिने योजना रहेको छ ।
स्थानीय चुनावले नै देखायो कि, निर्वाचनमा पैसाको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेको छ । तपाईंको क्षेत्रमा यस्तो प्रबृत्ति छ कि छैन ?
राजनीति सेवा हो । यो व्यापार ठेक्कापट्टा होइन । परिर्वतनको प्रतिफल जनतासम्म पुर्याउने गरी हाम्रा सेवाहरु परिचालित हुनुपर्छ । राजनीतिलाई फोहोरी खेलका रुपमा प्रयोग गर्ने व्यापार र ठेक्कापट्टा प्राप्त गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिंदैछ । यसको अन्त्यका लागि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेका योग्य इमान्दार, राष्ट्रभक्त, देशभक्त र जनपक्षीय व्यक्तिलाई राजनितिमा स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीति जिल्लाको विकास, निमार्ण र सम्मृद्विका निम्ति हुनु पर्दछ ।